Home Wararka Hadii Bashir Gobe gali waayay NISA, Muxyadin ma gayn karaa? Yasin Farey...
Hadii Bashir Gobe gali waayay NISA, Muxyadin ma gayn karaa? Yasin Farey ina adeerkiis oo la magacaabay
Janaraal Bashir Goobe oo fulinaya amarka RW Rooble ayaa magacaabay taliyaha ciidanka nabadsugida ee Gobobka Banaadir.
Wareegto uu ku saxiixan yahay Janaal Bashir Goobe ayaa taliyaha hogaanka NISA ee Gobolkka Banadir lagu sheegay in loo magacaabay G/le Muxyadin Maxamed Jimcaale.
G/le Muxyadin Maxamed Jimcaale ayaa waxa ay isku qoys ka soo jeedaan taliyaha uu magacaabay madaxweyne Farmaajo. Waxa la sheegyaa ujeedada loo magacaabay Muxyadin ay tahay in lagula dagaalo Janaraal Yaasin Fareey.
Madaama Janaraal Bashir Goobe uu ku fashilmay in uu galo ama uu iska xaadiriyo xarunta NISA ayaa la magacaabay G/le Muxyadin si uu xoog ugu qabsado godka jilicoow oo ah xarunta NISA.
Waa maxay ujeedada loo magacaabay Janaraal Bashir Goobe hadii uusan lahayn karti uu Ku tago hay’adda NISA. Dhanka kale ma laga yabaa in beesha ay ka dhasheen labada Taliye ee Yasin Farey iyo Muxyadin in ayan ku dagaalin jagooyinka loo kala magacaabay Labo will oo Walaalo ah.